Izingxenye ze-Auto Izingxenye Zezingxenye / Izingxenye Zemithi Yezimoto | Izingxenye ze-1D auto
Amafutha okuhambisa amafutha
I-plug enhle kakhulu ye-Spark
Uwoyela we-car injini
Ikhwalithi ephezulu, insizakalo ephakeme
Sigxile ocwaningweni& Ukuthuthukisa amamodeli aseJapan ePiston,
I-piston ring, liner, gasket, gasket egcwele, izimbotshana zezinjini,
Amafutha enjini, ama-spark plugs kanye nama-plugs avuthayo.
I-1D Auto Corporation Thola eSouth China Guang Zhou City, yatholakala ngo-2010 enolwazi oluthumelayo ngobuchwepheshe ezingxenyeni zenjini, inkampani inikezelwe, kanye ne-gask / ama-spark / ama-spark / ama-glor njll.
Siyaziqhenya ngokuba yiPiston yaseChina ePiston ne-Cons Asson Umkhiqizi ohlangana neToyota, Mitsubishi kanye ne-Isuzu Oezu Oem Supply Chain.
Inkampani ye-1D yenkampani yokuthola inzuzo egxile kwe-ngezansi:
1. Ucwaningo Oluqinile& Thuthukisa inqubo: Lungiselela amamodeli enjini angaphezu kuka-1600 kanye nemigqa yokukhiqiza engama-32, umthamo wokukhipha nsuku zonke 40,000 PCS Piston, 200,000 PCS Piston Piston Ring.
2. Isikhungo& Izitifiketi: Imishini ye-BOSCH / ye-Mosch / ye-Mosch eholele emhlabeni, iJapan NPR kanye no-170 abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe, ama-CCIP Coative, i-ISO / TSL6949-2002, i-ICET evunyelwe.
3. I-Cargo Logistic lula& Isitoko esanele esifanele: Yakha isizinda se-Factory Warehouse eSouth China Guangzhou City ukuze usheshe uphendule imininingwane yemakethe kanye nesidingo samakhasimende.
4. Imakethe eqondiswe& Inkonzo yamakhasimende: Vula isitolo esiqondile kanye nehhovisi lokuhweba, ufeze amakhasimende "njalo ngosizo oluncane" lwenkonzo ngemuva kokuthengisa.
Izingxenye ze-AUTO 1D zingumkhiqizi wezingxenye ze-auto ezigxile ezingxenyeni zenjini yemoto.
Ikhwalithi enhle kakhulu yekhwalithi engcono
I-1D engcono kakhulu yekhwalithi ephezulu ye-C feport, indawo& Izitifiketi: Imishini ye-Bosch / ye-Mosch / ye-Nokia
Ifektri engcono kakhulu ye-waw waw
I-1D wholesale waw ngentengo enhle - 1d, i-Japan NPR Technology kanye nochwepheshe abangama-170 abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe, i-CCIP Coative, i-ISO / TSL6949-2002, i-ICET evunyelwe.Ifektri engcono kakhulu ye-Waw& Isitoko esanele sokuma
I-plug yekhwalithi ephezulu yokuvutha wholesale - 1d izingxenye ze-auto co., Ltd.
I-plug ye-1D ephezulu ye-plug ye-1D yekhwalithi ye-1D Izingxenye ze-AUTO CO., I-LTD.
Ifektri engcono kakhulu ye-gasket ephelele
Ifektri engcono kakhulu ye-gasket ephelele ye-gasket, indawo& Izitifiketi: Imishini ye-Bosch / ye-Mosch / ye-Nokia
Ifektri engcono kakhulu ye-piston
Ifektri engcono kakhulu ye-Piston ephansi, indawo& Izitifiketi: Imishini ye-Bosch / ye-Mosch / ye-Nokia
Intengo engcono kakhulu ye-Piston Factory - 1D
I-1D Best Piston Factory Price - 1D, Isikhungo& Izitifiketi: Imishini ye-Bosch / ye-Mosch / ye-Nokia
Umenzi we-Professional Auto izingxenye zezingxenye zenjini yemoto iminyaka engaphezu kwe-11.
Abakhiqizi be-Piston Piston Ring
1. I-Toyota, Honda, SUZUKI, I-Dafa neNissan Pherololi Enjini Yamukela Indandatho yensimbi ebomvu ye-oxidation, i-aphoy yesibili, i-NPR yokwakha indandatho enkulu ehlanganisiwe noma i-rik noma indandatho ngayinye ifafazwa Ngekhodi yemibala (ebomvu, ephuzi futhi eluhlaza okwesibhakabhaka) nohlobo lwe-T noma n, indandatho ngayinye ifafazwe ngekhodi yombala (obomvu, ophuzi kanye nohlaza okwesibhakabhaka)2. Mitsubishi, iNissan, iToyota, uDiesel Engetines akwamukela i-oxidation yokuqala ebomvu, umugqa we-Midde Circle, i-Iron ye-Christiale, indandatho ye-taper, indandatho yesithathu i-Hole Spiral Support; Ikhodi ngayinye yemibala yokufafaza (ebomvu, ephuzi nohlaza okwesibhakabhaka)3. I-Isuzu Diesel Injini yamukela inqubo yasekuqaleni, amaplanethi amathathu aseceleni noma amaplanethi amane ahla phezulu, ukwelashwa okungaphezulu kwendandatho kawoyela kanye ne-polytetrafluorooroenenenenenenenenenene ye-Spring. Thayipha t noma n, ikhodi ngayinye yokufafaza umbala (obomvu, ophuzi nohlaza okwesibhakabhaka)
Umhlinzeki we-gasket ongcono kakhulu we-gasket
Umhlinzeki weGasket ongcono kakhulu.Ukuhlolwa komkhiqizo kuqhutshwa njalo ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi ephezulu.
kunconyelwa kakhulu lokho.
Abakhiqizi be-plug spark spark
Abakhiqizi be-plug spark.Ukuthuthukisa insizakalo yezokwenza ngcono ukuthuthuka kwesithombe somkhiqizo.
Ikhanda eliphakeme lekhwalithi ye-gasket persasset wholesale - 1D auto izingxenye
Iqhaza le-gasket lintshontshe, yinto ye-eastic seal phakathi kwe-cylinder block nekhanda lesilinda, esetshenziselwa ukuvimbela igesi ephezulu, ukugcoba uwoyela nokuphola nokunye.I-1D Auto izingxenye CO., LTD. Ikhwalithi ephezulu ye-gasket wholesale - 1D auto izingxenye ze-auto co., Ltd.
I-Intro ukusebenzisa ama-panty liners 1D izingxenye ze-auto auto., Ltd.
I-Cylinder Liner yingxenye ye-cylindrical, ebekwe emgodini wesilinda womzimba, futhi ilungiswe yikhanda lesilinda. I-piston yenza ukunyakaza okubuyisele emgodini wayo wangaphakathi namanzi apholile anikezwa ngaphandle. Umsebenzi we-cylinder liner yile:1. Isikhala sokusebenza kwe-Cylinder sakhiwa kanye nekhanda le-cylinder ne-piston.2. I-Cylinder Liner ye-Cylindrical Piston Diston Diston Unjini we-Piston Side Trust futhi iba ngumhomisi wokubuyisa ukunyakaza kwePiston.3. Dlulisa ukushisa komhlangano wePiston futhi ngokwayo emanzini apholile ukukwenza kusebenze ekushiseni okufanele.4. I-Cylinder Sleeve yenjini yedizili enezifo ezinama-stroke ahlelwe nge-port yomoya, evulwa futhi ivalwe yi-piston ukubona ukusatshalaliswa komoya.I-1D Auto izingxenye CO., LTD. I-Intro ukusebenzisa ama-panty liners 1D izingxenye ze-auto auto., Ltd.
Best 4d33 piston mitsubishi umphakeli
Alfin Fuso Truck Mitsubishi 4D33 Diesel Injini Izingxenye Piston 108mm For Me013312 Me016896Silandela inqubo ye-1D: Umkhiqizo wekhwalithi ephezulu, ikhasimende kuqala. Imikhiqizo yethu isebuchwepheshe baseJapan nemvelaphi yaseTaiwan.I-4d33 ingenye yamamodeli asabalele kakhulu. Futhi ikhwalithi yemikhiqizo yethu yamukelwa ngamakhasimende amaningi. Asibona kahle, kepha sinikeza ngqo okudingayo.Uyemukelwa ukuxhumana nathi futhi uqale ukubambisana kwethu kokuqala.I-1D Auto izingxenye CO., LTD. Best 4d33 piston mitsubishi umphakeli
Abakhiqizi be-Professional Injini Valve
I-Enjini ValveI-1D Auto izingxenye CO., LTD. Abakhiqizi be-Professional Injini Valve
Uma ungakwazi ukuthola noma iyiphi imikhiqizo ye-off-the-shelf efanelekile iphrojekthi, vumela i-ash light 'switch's Professional insizakalo yokwenza ngokwezifiso ikusize uthole imikhiqizo yakho efaneleke kungakapheli izinsuku eziyi-7 ngaphandle kokudela isikhathi sezemidlalo noma ngezifiso. Ukucaciswa Kwemikhiqizo: Ukusebenzisa isimo sobuchwepheshe bezobuchwepheshe ukuklama nokwenza imikhiqizo kuqinisekisa amakhasimende athola imikhiqizo enembile kakhulu etholakalayo.
1. Uphenyo: Amakhasimende atshela isici sefomu esifunekayo, imininingwane yokusebenza, umjikelezo wempilo, kanye nezidingo zokuhambisana.
2. ISIQINISEKISO: Ithimba lokuklama libandakanyeka kusukela ekuqaleni kwephrojekthi ukuqinisekisa imikhiqizo engcono kakhulu eyenzelwe ngokwezifiso ezifanelekileyo ukuze ivumelane nezidingo zamakhasimende.
Umkhiqizo udlala indima ebalulekile ezinhlobonhlobo zezicelo embonini.
Ukulahla ngokushesha, impilo ende kuze kube ngamakhilomitha ayi-120,000
Gasket ephelele.Ukumelana okuqinile kokugqwala, ingcindezi, ukushisa nokuphika kokugqwalaI-1D Auto izingxenye CO., LTD. Ifektri engcono kakhulu ye-gasket ephelele
Noma yimiphi imibuzo, ama-PLS asibhalela